यसरी कमाउन सकिन्छ गुगल मार्फत पैसा…. – Nepal Insider
3 months ago Kamal Tamang
मैले तपाइलाई करोडौ मान्छेहरुले गुगलबाट प्रसस्त कमाइराख्य छ भनेर भनिरहदा तपाइलाई सायद बिश्वास नालाग्या पनि हुन सक्छ तर बास्तबिकता चाही त्यही हो कि बिश्वभर अहिले करोडौ मान्छेहरु आफ्नो जीविकोपार्जनको लागी त्यहि गुगलमा निर्भर रहेको छ। याहुको युगमै शुरु भएको गुगलले जब जो सुकैले पनि गुगल मार्फत पैसा कमाउन सक्ने सिस्टम बनायो तब त्यसले बिश्वभर एक किसिमको तरंग ल्याएको थियो।
गुगलबाट पैसा कमाउन सक्ने आधार भनेको मुख्यतय तीन वटा तरिका छ ।
जब हामीले सुरुमा सुन्छौ कि गुगल मार्फत वेबसाईटबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर तब हामी हतार हतारमा के गर्छौ भने वेबसाईट सुरु गरिहाल्छौ । वेबसाईट सुरु गर्द हामीले अपाउनु पर्ने के कस्तो कुरा हो त्यो ख्याल गर्न नजान्द धेरै मान्छे असफल भएको देखिन्छ। गुगलबाट पैसा कमाउने भनेर जब हामीले गर्नु पर्ने कामहरु अगाडी बडाउछौ त्यस्मा धेरै कुआरहरु अत्यन्त चलाखी ढंगले पुरा गर्नु पर्छ ।
वेबसाईटबाट पैसा कमाउने भनेर भनिरहदा अब हामीले वेबसाईट शुरु गर्द केही महत्वपूर्ण कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ ।
ति के के हुन भने:
#1) कुन बिषय सँग सम्बन्धित वेबसाईट शुरु गर्ने हो ? त्यो निश्चित गर्नुस।
#2) जब हामीले वेबसाईट कुन क्षेत्रमा शुरु गर्ने हो त्यो निश्चित गरे पछी अब हाम्रो ध्यान भनेको डोमेन नाममा केन्द्रित हुनु पर्छ। डोमेन नाम दर्ता गरिरहदा सम्बन्धित क्षेत्रको हो भन्ने झल्कनु आवश्यकता छ । जस्तै यदी नेपाली मनोरन्जन सँग सम्बन्धित वेबसाईट शुरु गर्ने हो भने त्यस्तै खालको नाम हुनु जरुरी छ, जस्तै: www.kollywoodlife.com । साथ-साथमा अर्को के पनि हुनु पर्छ भने डोमेन नामको Authority राम्रो हुनु पर्छ । यो दुइटा कुरामा ख्याल नगरने हो भने सफल हुन गर्हो हुन्छ ।
गुगलबाट पैसा कमाउने भनेर भन्दा वेबसाईटको क्षेत्रको छनोट र डोमेन नामको छनोट भनेको फाउन्डेसन नै हो । यो चरणमा नै हामीले चलाखीपन देखाएन भने हाम्रो प्रयास खेर जान सक्छ। त्यसैले यो चरणलाई ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ ।
#3) हामीले डोमेन नाम छनोट गरिसके पछी उक्त डोमेन नाम दर्ता अनी उक्त डोमेन नाममा वेबसाईट बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
#4) वेबसाईट शुरु गरिसके पछी वेबसाईटको content strategy राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ । गुगलबाट पैसा कमाउने भनेर शुरु गर्न लागेको हुनाले हामीले हाम्रो वेबसाईटको Contents गुगल friendly हुनु पर्छ । अझ भन्नु पर्दा के हो भने Search Engine Optimization(SEO) को बारेमा तपाईंले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जब तपाईंले SEO को बारेमा बुझ्नुहुन्छ त्यसपछी आफ्नो वेबसाईटलाई गुगल सर्च रिजल्टमा न. १ मा कसरी देखाउने भन्ने बारेमा बिस्तृत रुपमा बुझ्नुहुन्छ ।
#5) Content Strategy राम्रो बनाएर धेरै भन्दा धेरै Visitors/Traffic ल्याउन सफल भए पछी तपाईंले गुगलबाट पैसा कमाउनको लागी गुगल एड्सेन्समा Apply गर्नु पर्छ । उक्त application approved भयो कि भएन भनेर गुगलले एक दुई दिनमा ईमेल पठाउछ। धेरै मान्छेहरु यो चरणमा ढुकढुक गरेर बस्छ। किन भने गुगलले application approved गर्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । तर तपाईंले सही ढंगले सुरुवात गर्नु भयो भने यहाँ कुनै डर लिनु आबश्यक छैन ।
#6) यदि गुगलले application approved गर्‍यो भने त्यसपछी तपाईंले बिज्ञापनको कोड मार्फत आफ्नो वेबसाईटमा बिज्ञापन देखाएर पैसा कमाउनु हुन्छ । जब तपाईंको कमाइ कम्तिमा पनि १०० डलर पुछ तब तपाईंको पैसा नेपालमा western union money transfer मार्फत आइपुग्छ ।
यसरी तपाईंले वेबसाईट मार्फत नेपालबाट पैसा कमाउन सक्नु हुन्छ ।
त्यस्तै गुगल मार्फत पैसा कमाउने अर्को तरिका भनेको युट्युब च्यानल हो। तपाइले बिभिन्न खालको भिडियो बनाएर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ । युट्युबको पनि तपाईंले राम्रो Strategy बनाउनु पर्ने हुन्छ । यहाँ पनि धेरै प्रतिस्पर्धी भएको हुनाले तपाईंले अरु प्रतिस्पर्धीहरुलाई उछिन्ने हिसाबले शुरु गर्नु भयो त्यसले दिर्घकालिन रुपमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ । त्यसको लागी के गर्ने हो भने तपाईंले शुरु गर्न लागेको युट्युब च्यानलको जस्तै अरु च्यानलको स्थिती कस्तो छ भनेर तपाईंले बिश्लेशण गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ। यस्तो भयो भने मात्र सफल हुन्छ नत्र तपाइले गरेको प्रयास खेर नजाला भन्न सकिन्न। त्यसैले राम्रो योजना बनाउनुस।
युट्युबको नियम कम्तिमा पनि चाहिने १ हजार सब्स्क्राइबर र ४ हजार घण्टा watch time पुर्याउनुहोस अनि गुगल एड्सेन्समा apply गर्नुस। यदि approved भयो भने तपाइको युट्युब च्यानलको भिडियो बाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। यसमा वेबसाइट जसरि विज्ञापनको कोड राखिरहनु पर्दैन। कसलाई अथवा कहाँ बिज्ञापन देखाउने भनेर गुगलले आफैले Manage गर्छ ।
त्यस्तै गुगल मार्फत पैसा कमाउने अर्को तरिका भनेको मोबाइल एप मार्फत हो। तपाइले बिभिन्न खालको मोबाइल एप बनाएर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ । मोबाइल एपको क्षेत्रमा पनि धेरै प्रतिस्पर्धी भएको हुनाले तपाईंले अरु प्रतिस्पर्धीहरुलाई उछिन्ने हिसाबले शुरु गर्नु भयो त्यसले दिर्घकालिन रुपमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ। त्यसको लागी के गर्ने हो भने तपाईंले सबैले रुचाउने खालको मोबाइल एप ल्याउनु भयो प्रसस्त आम्दानी हुने सम्भाबना छ। जस्तै हाम्रो पात्रो। अहिले हरेक नेपाली मोबाइलमा यो एप छ। धेरै जनाले हाम्रो पात्रो एप चलाउने भएको हुनाले यो एप बनाउनेले प्रसस्त पैसा कमाइराख्या छ।
यदि तपाइँ पनि मोबाइल एप मार्फत पैसा कमाउन चाहनु हुन्छ भने सबैले रुचाउने खालको मोबाइल एप ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाइको मोबाइल एप प्रयोग कर्ता धेरै भैसकेपछि त्यसबाट पैसा कमाउन सक्ने सम्भाबना धेरै हुन्छ। त्यसपछि तपाइले गुगल एड्सेन्समा Apply गरेर गुगल मार्फत बिज्ञापन देखाएर पैसा कमाउन सकिन्छ।
के तपाइँ पनि गुगल मार्फत पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? यदि तपाइँ पनि गुगल मार्फत नेपालबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ७+ घण्टाको भिडियो कोर्ष मार्फत अझ बिस्तृत रुपमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ।
कोर्ष लिंक: नेपालबाट Google मार्फत पैसा कसरि कमाउन सकिन्छ ? (7+ Hours Complete Video Course)
Previous गुरु भट्टराईको प्रहार बाबुराम भट्टराई माथि………………
Next गरिबी,पर्देश,बाध्यता र रातो काठको बाकस
प्रकाश सपुतलाई ‘दलित मानसिकता’ भनेपछि शिव परियारले दिए कडा जवाफ
1 min ago नेपाल इन्साइडर संवाददाता
2 hours ago नेपाल इन्साइडर संवाददाता
साउदीमा बितेका छोराको शव देख्न नपाएकी सुर्वितालाई ओलि सरकारले न्याय दियो
3 hours ago नेपाल इन्साइडर संवाददाता
काठमाडौँमा महिलामाथि सुई आतंक, कारबाही गर्न नविनाको माग
6 months ago नेपाल इन्साइडर संवाददाता